ATN: ဓါးတချောင်းရဲ့ ပြက္ခဒိန် (အစအဆုံး)
Very nice post. please write more like this kind of post. We can learn from out from your life diary...
ဒါမျိုး ထပ်ရေးခိုင်းတာ မိန်းမထပ်ယူခိုင်းတာနေမှာ ဟီး
လက်မှတ်လေးတွေ သိမ်းထားတုန်းဆိုတော့ ဓားလေးကလဲ အသုံးဝင်တုန်း ဖြစ်မှာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ၀မ်းသာတယ်။
ဓါးလေးကို .အမြဲ ထက် ရှအောင်.. ထိမ်းသိမ်း..သွေး ပေးမယ် ဆို တဲ့... ခံယူချက်လေး ကို.....၀တ္တု တစ်ပုဒ် ကို ဖတ်ရတာ ထက် ပို တဲ့....အတွေး တွေ နဲ့...လေးစား မိပါတယ်......
ဘတ်စ်ကား လက်မှတ်ကလေးတွေ သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့
လွှသွားဓါးလေး အမြဲအသွားပြတ်ရှ၊ ညီညာနေနိုင်ပါစေ....။
ဓါးဇတ်လမ်း အစ အဆုံး ဖတ်သွား ပါပြီ။
ကိုအောင်သာငယ် ၀တ္တု အရေးကောင်းမှန်းလည်း သိသွားပြီ။
ဓါးလေးလည်း အသုံးဝင်နေ ...ထက်နေပါစေ။
အရမ်းကောင်းတယ် ကိုအောင်ရာ.. တင်ပြပုံ အရေးအသား နောက်ဆုံးပေးထားတဲ့ အတွေးလေးရော အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကြည်နူးဆွတ်ပျံမှုတွေ သတိပြုစရာတွေ အများကြီး ရသွားတယ်ဗျို့ :)
ရေးသူက ရေးလို့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ ဖတ်သူလည်း လာဖတ်ပါတယ်။ ပျော်စရာ၊ ကြည်နူးစရာတွေနဲ့အတူ အလေးထားရမည့်အကြောင်းလေးတွေ ရလိုက်တယ်။
ဝတ္ထုကတော့ အထူးကိုပြောစရာမလိုလို့ မပြောတော့ဘူး အစ်ကိုရာ .. ၄၀၀၀ တန် ရာမဟာ အကော့စတစ်ကလေးကို နှမျောနေတယ် :)
နာတို့ အကိုကြီးက ကဤကဲ့သို့ ကဗျာဆန်စွာ ချစ်တတ်သည်
‘ပစ္စည်းဝဲတယ်’ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာဗမာစကားမှာတော့ မကြားဖူးပါ၊ ရခိုင်လို ‘ဝေးပြစ်တယ်’ ဆိုတာနဲ့ဆင်ပြီး ဗမာလို လွှင့်ပြစ်လိုက်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရမယ်ထင်ပါသည်။
ပြီးသွားလေပြီပေါ့.. စာရေးဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဆိုတာ တကယ့်ဇာတ်လမ်းလို့ထင်တဲ့ထိ ပဲ နော်...
ဟိ မဟေသီက ဒီထဲက အမျိုးသမီးက ဘယ်သူလဲလို့ မမေးဘူးလားးးးးးး
လက်မှတ်တွေ အခုထိ သိမ်းထားတုန်းပဲလား။
ဆောရီးနော်... ကို... - လို့ ပြောရင်း သူ့ကို လှမ်းဖက်လာသည့် ဟန်နာ့ ကိုယ်လေးကို အသာ အယာ ပြန်ထွေးပွေ့ထားရင်း နှစ်ယောက်သား ငြိမ်သက်နေမိသည်။ ခုမှပဲ တယောက် နှလုံး ခုန်သံကို တယောက် ကြားကြတော့ သည်လား။ ခုမှပဲ တယောက် နှလုံးသားကို တယောက် နားလည်ကြတော့ သည်လား။
အဟိ ဒီစာပိုဒ်လေး ကရင်ခုန်ကြည်နူးဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ အကိုကြီးရေ..။
ဓါးလေး အမြဲတမ်း ပြတ်ရှနေနိုင်ပါစေ..။
၅၀ က ဘယ်ဟာလဲလို့ စေ့စေ့စပ်စပ် ရှာဖွေသွားသည်။ အဟဲ။
အစ်ကို အစ်မများထံမှ သင်ယူလျက်။ :)
ဒို့အကိုရဲ့စာကတော့ ရိုမန်တစ်ပဲဗျ။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ဘန်ကောက်ကိုလွမ်းလာတယ်ဗျာ။ ၀ဲတယ် ဆိုတာ ထားဝယ်စကားပဲနော်။ စာထဲမှာထည့်သုံးထားတာ လှတယ်ဗျာ။ ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးဗျာ ဦးဖိုးလှိုင်ရဲ့ မြင်းထိန်းလိုဖြစ်မှာစိုးလို့
ရို့ မန့် စ်လေးကော ဘဝကော ရောယှက်ပြီး ရေးထားတာ လှတယ် အစ်ကိုရာ။
အစအဆုံး နောက်တခေါက် ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။ စတွေ့ကြတဲ့ အချိန်ကနေ အိမ်ထောင်တည်ထောင်၊ နှစ်ဦးအတူ ရုန်းကန်ကြရတာတွေ၊ ကလေးတွေ ရလာပြီး မိသားတစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ရှိတာတွေ ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။
သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အမှန်အကန်ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်ပါပဲ ...
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပိုစ့်လေး အကိုရာ အချစ် မိသားစု အိမ်ထောင်ရေး စုံလို့ လေးစားတယ် အကိုရေ နောက်လဲ များများရေးပါ ဓါးလေးလိုပေါ့ ထက်မြက်နေပါစေ
20 Jan 09, 04:48
လင်းဒီပ: ဓားတစ်ချောင်းကို အစအဆုံးလာဖတ်သွားတယ်အစ်ကိုရေ..
20 Jan 09, 09:27
TZA: လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ၊ ဓါးတချောင်းရဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ရေလည်ကြိုက်ပါတယ်။
ဓါးတချောင်းရဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို အစအဆုံး ဖွင့်ကြည့်သွားတယ် အစ်ကိုရေ။ အရေးအသားက ကောင်းပြီသားဆိုတော့ ဘယ်လိုမန့် ရမှန်းကို မသိတော့ဘူးဗျာ။ မိသားစုဘ၀ အစလေးကနေ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကို ခံစားသွားပါတယ်။ အဲဒီ ဓါးလေး အမြဲတမ်းထက်မြပြတ်ရှနေနိုင်ပါစေဗျာ။
အခုလို တစ်စုတစည်းထဲ ဖတ်ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်...
ဓါးကလေး အမြဲတမ်း ထက်မြက်ပြတ်ရှနေနိုင်ပါစေ...
*** ဒီပိုစ့်နဲ့ အတူ ဘန်ကောက်ကို တော်တော် သတိရသွားတယ်...